Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Muqdisho | KEYDMEDIA ONLINE
Wararkii ugu dambeeyay Xaaladda Muqdisho
Todobaadkaan ayaa u muuqda mid ka deggan isbuucii hore, kadib markii uu billaawday iyadoo uu wax ka badalay habdhaqii hore sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Rooble, isla markaana uu qeyb ka mid ah is mari waagii jiray ku xalliyay miiska wada hadalka.
MUQDISHO, Soomaaliya – Todobo maalin ka hor, Sabtigii hore dadka Magaalada Muqdisho wuxuu ugu billaawday walwal iyo hubanti la’aan xooggan kadib rabshado iyo dagaallo filan-waa ahaa oo ka dhacay Caasimadda.
Hadallada kulul ee Beesha Caalamka, baaqyadii Puntland iyo Jubballand, iyo hadalkii Madaxweyne Siciid Deni waxa ay sii kordhiyeen cabsida iyo wal-walka laga qabo in Xamar dagaallo ka qarxaan.
Hanjabaadda Mucaaradka, hadallo aan ka fiirsi lahayn oo ka soo kala baxay Wasaaradaha Amnga iyo Warfaafinta Isbuucii hore, iyo waraysigii uu warbaahinta siiyay Jenaraal Indhacadde, waxa ay sii murjiyeen xaaladda shacabka Xamar.
Wax kasta ayaa cirka isku shareeray kadib markii Golaha Midowga Mushariintu ay ku dhawaaqeen in uu Jimacaha dhacayo Bannaan-bax, kadib baaqashadii madkii hore ee rabsaduhu ka dhasheen, isla markaana mar kale Dowladdu ku dhaqwaaqday in aan la isku soo bixi karin.
Shacabka deggan goobalaha uu suuragalka ka yahay in Dibad-bax ka dhaco Muqdisho ayaa ka qaxay xaafadahooda Khamiistii cabsi ay ka qabaan xasarado dagaal isku baddala oo ka dhaca Mudaharaadka ay Mucaaradka iclaamiyeen.
Si looga baaqsado wax la mid ah arrintii ka dhacaday Muqdisho 19-kii bishaan, guddi isugu jira siyaasiyiin iyo masuuliyiin xilal kala duwan haya oo reer Muqdisho ah ayaa u istaagay in ay waan-waan ka dhex billaabaan labada dhinac, waxa ayna ku guuleysteen in ay isku keenaan saacado ka hor xilligii bannaan-baxa.
Waxaa la garay heshiis, waxaa la xalliyay tabashooyin kala duwan, waxaaana la abuuray isku soo dhawasho taas oo sababtay in filashooyinkii hore fuli waayaan.
Saakay, xaaladdu waa mid deggan, oo waxaas la saadaalinayay ma suura galin, dadka ku dhaqan Muqdisho waxa ay si isku mid ah u soo dhaweeyeen hishiiskii ay gaareen Mucaaradka iyo Xukuumadda Rooble.
Qeyb ka mid ah Shacabka Muqdisho oo Keydmedia Online la hadlay waxa ay ugu baaqeen Xukuumadda iyo Mucaaradka in ay sii wadaan wada hadalka, ka wada shaqeeyaan nabadda iyo xasilloonida, waxayna si gaar ah Farmaajo u baaqeen in uu garab istaago RW Rooble oo u muuqda mid soo dabcay.